Jade Dynasty ( 2019 ) - Myanmar Asian TV
MMATV ပရိတျသတျကွီးအတှကျ 2019ခုနှဈကထုတျလှတျခဲ့တဲ့ ‘’Jade Dynasty 2019’’ ဇာတျကားလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
မငျးသားကတော့ The Utamed ဇာတျကားနဲ့တဈဟုနျထိုးလူသိမြားလာတဲ့ Xiao Zhanဖွဈပွီး
မငျးသမီးကတော့ Li Qin, Meng MeiQi နဲ့ Tang YiXingတို့က ပါဝငျသရုပျဆောငျ ထားကွပါတယျ
တရုတျနိုငျငံရဲ့ တိုးတကျလာတဲ့ CGI effectတှနေဲ့ ကွညျ့ရတာတဈမြိုးလေးကောငျးပါတယျ
ဒီဇာတျကားဟာ The Legend Of Chusen seriesတှဲကို Movie versionအနနေဲ့ပွနျလညျရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ
Seriesကို movieအဖွဈရိုကျကူးရတာဖွဈတဲ့အတှကျ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ဇာတျကွောငျးကိုအကုနျမပွနိုငျတာကလှဲရငျ ကွညျ့သငျ့တဲ့ကားလေးတဈကားပါ(ဘာသာပွနျမမလှလှလေးက ပွနျထားတာမို့ပိုကွညျ့သငျ့?❤️)
ဇာတျလမျးအကဉျြး- တဈနမှေ့ာ ကနျြးရှောငျဖနျးဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာ သူ့အိမျနီးနားခငျြး ညီအဈကိုဖွဈသူ ကငျြးယှီနဲ့ထငျးခုတျပွီးပွနျအလာမှာ တဈရှာလုံးအသတျခံထားရတဲ့မွငျကှငျးကိုမွငျလိုကျရပါတယျ။
အဲ့မတိုငျခငျ ညမှာရှောငျဖနျးကို သှေးသောကျပုတီးမိစ်ဆာကွီးက သူ့ရဲ့အတှငျးအားတှလှေဲပွောငျးပေးခဲ့ပါတယျမနကျရောကျတော့ အသကျရှငျကနျြခဲ့တဲ့သူတို့နှဈယောကျကို ခငျြးယှငျဂိုဏျးက ချေါထားပွီးကြှေးမှေးစောငျ့ရှောငျ့ထားပါတယျမိစ်ဆာရဲ့သှေးသောကျပုတီးကိုဆှဲထားတဲ့ ကနျြးရှောငျဖနျးဟာ ခငျြးယှငျဂိုဏျးမှာ တရားသောသိုငျးကငျြ့စဉျတို့ကို ကငျြ့မရပဲဖွဈနပေါတယျ -မိဘတှအေသတျခံလိုကျရတဲ့အတှကျလကျစားခခြေငျြစိတျ ပွငျးပနြတေဲ့ကနျြးရှောငျဖနျးတဈယောကျ လကျစားခနြေိုငျပါ့မလား?
ဆိုတာကို ဒီJade Dynasty 2019ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးမှာကွညျ့ရှုနိုငျပါပွီ
MMATV ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် 2019ခုနှစ်ကထုတ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ‘’Jade Dynasty 2019’’ ဇာတ်ကားလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
မင်းသားကတော့ The Utamed ဇာတ်ကားနဲ့တစ်ဟုန်ထိုးလူသိများလာတဲ့ Xiao Zhanဖြစ်ပြီး
မင်းသမီးကတော့ Li Qin, Meng MeiQi နဲ့ Tang YiXingတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားကြပါတယ်
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်လာတဲ့ CGI effectတွေနဲ့ ကြည့်ရတာတစ်မျိုးလေးကောင်းပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားဟာ The Legend Of Chusen seriesတွဲကို Movie versionအနေနဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်
Seriesကို movieအဖြစ်ရိုက်ကူးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဇာတ်ကြောင်းကိုအကုန်မပြနိုင်တာကလွဲရင် ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ(ဘာသာပြန်မမလှလှလေးက ပြန်ထားတာမို့ပိုကြည့်သင့်?❤️)
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း- တစ်နေ့မှာ ကျန်းရှောင်ဖန်းဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာ သူ့အိမ်နီးနားချင်း ညီအစ်ကိုဖြစ်သူ ကျင်းယွီနဲ့ထင်းခုတ်ပြီးပြန်အလာမှာ တစ်ရွာလုံးအသတ်ခံထားရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။
အဲ့မတိုင်ခင် ညမှာရှောင်ဖန်းကို သွေးသောက်ပုတီးမိစ္ဆာကြီးက သူ့ရဲ့အတွင်းအားတွေလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်မနက်ရောက်တော့ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကို ချင်းယွင်ဂိုဏ်းက ခေါ်ထားပြီးကျွေးမွေးစောင့်ရှောင့်ထားပါတယ်မိစ္ဆာရဲ့သွေးသောက်ပုတီးကိုဆွဲထားတဲ့ ကျန်းရှောင်ဖန်းဟာ ချင်းယွင်ဂိုဏ်းမှာ တရားသောသိုင်းကျင့်စဉ်တို့ကို ကျင့်မရပဲဖြစ်နေပါတယ် -မိဘတွေအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်လက်စားချေချင်စိတ် ပြင်းပျနေတဲ့ကျန်းရှောင်ဖန်းတစ်ယောက် လက်စားချေနိုင်ပါ့မလား?
ဆိုတာကို ဒီJade Dynasty 2019ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
Translator : Minnie Hanna
Actors: Chen Li-Wei, Hsiao-hsuan, Li Qin, Meng Meiqi, Tang Yixin, Xiao Zhan
Soliddrive.co Myanmar990 MB Download Mega.nz Myanmar990 MB Download